New York Samachar
कांग्रेस बैठकमा सेयर बजारको चर्चा
काठमाडौं, १५ चैत । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सेयर बजार ओरालो लाग्नु मुलुकका लागि शुभ संकेत नभएको ठहर गरेको छ । बिहीबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सेयर बजार ओरालो लाग्नु मुलुकका लागि शुभ संकेत नभएको ठहर गर्दै सरकारलाई यसप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ ।
फ्ल्यासब्याक: पहिलो भ्रमणमा ओली र मोदीबीच चर्काचर्की
काठमाडाैं, १४ चैत । ८ फागुन २०७२ मा हैदरावाद हाउसमा प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच औपचारिक दुईपक्षीय वैठकमा भनाभन भयो । बिषय थियो : नेपालको संविधान । उक्त वैठकमा सहभागी कूटनीतिज्ञका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए,
यस्तो बन्दै छ ओलीको राजकीय भारत भ्रमण
काठमाडाैं, चैत । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न भारत भ्रमणमा नेपालको राजनीतिक विषयमा कुराकानी नहुने भएो छ । निर्वाचनमार्फत राजनीतिक संक्रमण सम्पन्न भईसकेको अवस्थामा अब ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच आर्थिक विकासका
आज संसद बैठक बस्दै, के–के छन् कार्यसूचि ?
काठमाडाैं, १२ चैत । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठकमा तीन अध्यादेश पेश गर्ने तयारी छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश र वेपत्ता व्यक्तिको छानबिन एवम् सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन
बाम एकताः रिपोर्ट तयार पार्न माओवादीले तोक्यो इन्चार्ज
काठमाडाैं, १२ चैत । नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँग पार्टी एकताको निर्णय गर्न बिहीबारका लागि सचिवालय बैठक बोलाएको छ । बैठकले एकताको महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने माओवादी नेता मणि थापाले बताए । एकताका लागि माओवादी प्रदेश इन्चार्जहरूले
ईयु प्रतिवेदनप्रति प्रधानमन्त्रीको आपत्ति - 'हामीलाई हेपेको ?'
काठमाडाैं, १२ चैत । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले युरोपियन युनियन ईयु को निर्वाचन प्रतिवेदनले नेपालको सार्वभौमसत्ताको अपमान गरेको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका छन् । प्रतिवेदनमाथि आपत्ति जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको आग्रहमा ईयुले प्रतिवेदन सच्याउन
दिल्लीले यसरी गर्दै छ ओलीलाइ स्वागत
काठमाडाैं, १२ चैत । नेपालमा करिव दुईतिर्हा बहुमनजिकको बामपन्थी सरकारलाई उच्च महत्व दिँदै भारतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चैत तेस्रो साता दिल्लीमा स्वागत गर्दै छ । विगतमा मधेसको सीकांनको माग सम्बोधन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको दिल्लीले अहिले धारणा बदलेको छ ।
पुनः शुरूकै प्रक्रियाबाट १९ विधेयक
काठमाडौं, ११ चैत । अघिल्लो संसद्ले टुंग्याउन नसकेका डेढ दर्जन विधेयक फेरि शुकै प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने भएको छ । अन्य कानुनको मस्यौदासमेत नबनेको अवस्थामा निष्क्रिय रहेका विधेयक तत्काल प्रक्रिया अघि बढाएर संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिन सकिने संसद् सचिवालयले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
सभापति देउवाले प्रकाशमानलाई हकारेपछि...
काठमाडाैं, ११ चैत । कांग्रेस बैठकमा शनिबार आठ जना केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका छन् । बैठकमा गुटगत आरोप-प्रत्यारोप भएको छ । संस्थापन पक्षका नेताहरू नेतृत्वको बचाउमा देखिए भने रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष आलोचनामा उत्रिए ।
कांग्रेस बैठकः गोपालमान अगाडि तानिँदा प्रकाशमान आगो
काठमाडाैं, ११ चैत । कांग्रेसको चुनावी समीक्षा बैठकको दोस्रो दिन शनिबार गुटगत आरोप-प्रत्यारोप भएको छ । संस्थापन पक्षका नेताहरू नेतृत्वको बचाउमा देखिए भने रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष आलोचनामा उत्रिए । यसअघि मर्यादाक्रम नमिल्दा पूर्वउपसभापति